Itoophiyaan bloogaroota Zone 9 shororkeessummaan yakkite gadi lakkise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Itoophiyaan bloogaroota Zone 9 shororkeessummaan yakkite gadi lakkise
Manni murtii Itoophiyaa bloogaroota ‘Zone 9’ jedhamuun beekamana afur yakka shororkeessummaan himatamanii erga Bitootessa 2014 mana hidhaa turan bilisaan gadi lakkisuun isaa gabaafame.
Barreessitoonni Zone 9 miseensota 9 ammate kan too’annaa tika nagaa biyyattii jala oolan imaammata mootummaa qeequudhaan barreessitaniirtu, akkasumas ummanni mootummaa irratti akka ka’u godhuudhaaf yaaltaniirtu himannaa jedhuun ture. Deeggartoonni barreessitoota kanniiniifi jaarmayaaleen mirga namaaf falman tankaarfiin mootummaa Itoophiyaa lammiilee ukkaamsuuf kan qiyyaafate malee barreessittoonni kunniin yakka raawwatanii miti kan mana hidhaatti darbamaniif jechuudhaan mootummaa afoo dhaabbataa turan.
Mootummaan biyyattii baatii afur duras baarreessitoota Zone 9 shan yakka ittiin himate gatuudhaan balbala mana hidhaa Qiliinxoo jalaa banuun isaa niyaadatama.
Barreessitoonni Zone 9 erga hidhamanii kaasee si’a 39 mana murtii deddeebi’an.
Bloogaronni (barreessitoonni) Zone 9 Itoophiyaan erga bara 2009 seera farra-shororkeessummaa, hanga woggaa 20 nama adabsiisu, baastee asi nama imaammata mootummaa qeequudhaan barreessu kamuu yakka shororkeessummaan sodaachisafi adamsa, isa cime jette ammoo yakkaa mana hidhaatti tortorsaati kan turte. Seeraafi tankaarfiin mootummichaa kuni barreessitootaafi gaazexeessitoota heddu kan hidhaaf, baqaa fi doorsisaaf saxilaa kan ture.
Motummaan irra dedeebi’ee namoonni too’annaa jala oolan hundi yakka cimaa irratti waan bobba’aniif malee akka gaazexeessaatti (bloogaraatti) waan hojjataniif miti jechuun himannaafi qeeqa kallatii hundaa itti darbatamaa ture kan haale. Dhuaagaan jiru garuu, inni dubbii mootummaa kana fashalsu, mootummaan mataan isaa namoota yakka shororkeessummaan himatee mana hidhaa deddeebisa ture irraa waan tokko dhabnaan dhumarratti bilisaan geggeessuu isaati. Kuni kan ta’u garuu erga badiifi miidhaan cimaan lammiilee irratti raawwatee booda. Namonni yakka malee yeroodheeraadhaaf harka mootuummatti dararaman Itoophiyaa keessatti beenyaas akka hinarganne nibeekama.
Barreessitoonni zone 9, guyyaa 539’f mana hidhaatti erga dararamanii booda gadi lakkifamuun isaanii mirga yaada ufii ibsachuutiif akka injifannootti ilaallamuu kan hinqabne ta’uu isaati Amnesty International kan ibse. ‘Jalqabumaa kaasee mootummaan dharaan yakkee isaan hidhee mana murtii sobaatti isaan dhihessuun sirrii hinturre,’ jedhe Mutoonii Waanyekii, daayireektariin Amnesty International naannoo Baha Afrikaa. Itti dabaluudhaanis, Mutoonii Waanyekii, mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irree ta’uu dubbatee, kanniin mana hidhaa jiran hundis akka hatattamaan gadi lakkifaman gaafatee.
Mootummaan Itoophiyaa namoota shororkeessummaa irratti bobba’uu isaaniitiif hidhe kan jedhu. Irra deddeebi’ees kana kan ittiin mirkaneessu raga gayaa qabaachuu isaati kan dubbataa ture. Kan irra deddeebi’ee mul’ataa jiru garuu namoota murti mana seeraan alatti erga yeroo dheeraadhaaf hidhee booda yakka irraa bilisa jechuun gadi lakkisa. Lammiin biyyattii kamuu shororkeesuummaadhaan osoo ragaan gayaan hinargamne yakkamuun jalqabumaa sirrii miti. Yakka gurguddaadhaan himatamanii dhumarra bilisa bayuun kan mul’isu jalqabumaa kaasee namoonni hidhamuu hinqabne, mirga mulqamanii jiruufi naga sarbamanii, mana hidhaatti darbamuu isaaniiti. Bifa kanaan namoota meeqa kan dararamaa jiran laata?
Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa Oromoonni kumaatamaani laakkawaman shorokeessummaan himatamanii ganna hedduuf mana hidhaa addaddaa keessatti akka tortoraa jiran nibeekama. Nama mirga isaaniif falmee, akka worra zone 9’f lallabametti, harka mootummaatii isaan gachisiisutu dhabameeti malee, yakka isaanii hinfakkaatu kan mana hidhaa keessa bara baraaf isaan jiraachise.
bloogaroota zoonii 9
Previous articleNCR Software Monitors Commercial Bank of Ethiopia’s Multivendor ATM Network
Next articleTaphattonni Eertiraa gara biyyaatti deebifamuu hinqaban, jedhe manni murtii Botiswaanaa